VIH/Sida : Olona folo isan’andro no voa -
AccueilSosialyVIH/Sida : Olona folo isan’andro no voa
VIH/Sida : Olona folo isan’andro no voa
12/10/2018 admintriatra Sosialy 0
Ny iray isan-jaton’ny vahoaka malagasy no voamarina fa mitondra ny aretina VIH/ Sida. Misy manerana ny faritra 22, sy faritany 6 ny aretina, ary ahitana azy daholo na vehivavy, na tanora, na lehilahy. Ny vehivavy no tena ahitana azy, satria ny vehivavy no mazoto kokoa manao ny fitiliana, araka ny vaovao voaray. Marihina fa amin’ny alalan’ny fitiliana ihany no ahafahana mamaritra, fa mitondra ny tsimok’aretina Vih/Sida na tsia ny olona iray. Efa nanomboka ny taona 1987 no nahitana tranga VIH/Sida teto Madagasikara, ary amin’izao fotoana izao, efa miha-hita tsikelikely ny olona mitondra ny aretina, izay misy ireo manaraka fitsaboana. Efa mihena kosa ireo matin’ny Sida eto Madagasikara amin’izao fotoana izao. Izany dia hatramin’ny nisian’ny fanafody sy hatramin’ny nahitana ireo olona voamarina fa mitondra ny aretina. “Isan-taona dia misy foana ny olona “séropositif”, ary nanomboka ny janoary 2018, olona folo isan’andro farafahakeliny no “séropositif” hita mandritra ny fitiliana eny amin’ny CDV (centre de depistage de VIH), ary misy lehilahy sy vehivavy, fa ny vehivavy no betsaka kokoa noho izy ireo marisika manao ny fitiliana”, hoy ny fanazavan-dRakotonirina Emmanuel, ao amin’ny fikambanana Serasera Fanantenana. Raha 10 isan’andro araka izany ny olona voamarina fa mitondra ny aretina eto Madagasikara nanomboka ny janoary 2018 mankaty, dia efa tafakatra 2 180 ny olona miriaria voan’ny aretina ankehitriny. Ahiana ihany koa ny mety hahalasa azy ity ho valanaretina.
Raha oharina tamin’ny taona lasa dia voalaza fa nitombo ny olona voan’ny aretina Sida eto Madagasikara tamin’ity taona ity. Fantatra fa ny fanaovana firaisana ara-nofo tsy voaaro, ny fampiasana fitaovana maranitra tsy voadio, toa ny fandehanana amin’ny mpitsabo nify, ny fiterahana no antony mahatonga ny aretina Sida. Araka izany, zava-dehibe ny fanentanana sy ny fanabeazana eo amin’ny Ray aman-dreny sy ny zanaka amin’ny fanabeazana ny tanora. Mila fifampiresahina ny Ray aman-dreny sy ny zanaka amin’izao firoboroboan’ny teknolojia izao, mba tsy hiroboka amin’ny firaisana ara-nofo aloha loatra, satria izay no mahatonga ny fiparitahan’ny aretina azo amin’ny firaisana ara-nofo, ny vohoka tsy niriana, sy vohoka aloha loatra ho an’ireo tanora, ka matetika miteraka ny fahafatesana eo ampiterahana, noho izy mbola tsy matoy tsara ny taova. Tsy ny Ray aman-dreny ihany anefa no entanina eto fa ny mpitondra firenena iray ihany koa, ny amin’ny tokony handraisana andraikitra ny vahoaka ao aminy, mba hiady amin’ny aretina VIH/ Sida.
Fifidianana filoham-pirenena : Mihenjan-droa ny tady eo amin’ ny “préfet » sy ny kandidà
Manoloana ny hafanan’ny fampielezan-kevitra, izay tonga hatramin’ ny fifandonana, dia nanambara ny préfen’ ny polisin’ Antananarivo, ny jeneraly Ravelonarivo Angelo, fa “efa niresaka tamin’ny tonia mpampanoa lalàna aho, fa ireo izay tratra manakorontana amin’izao fampielezan-kevitra ...Tohiny
Filoha Rajaonarimampianina Hery : Mila ampitaina amin’ny ankizy ny soatoavina maha malagasy
Filoha Hery Rajaonarimampianina : “Hatao laharam-pahamehana ny fandriam-pahalemana”
Gazety Triatra / La Ligne de Mire : Notorian’i Andry Rajoelina ny talen’ny famoahana